China plastic PET filament mveliso brush kunye nabenzi | Xinjia
Intambo yeplastiki yePET yebrashi yasekhaya
Ukongeza kwiipropathi ze-PBT, i-PET inezi zinto zilandelayo: ukomelela kunye nokuqina; ukudinwa, ukuxhathisa ukuxubana, ukumelana neekhemikhali kunye nokuchasana nobushushu
Phawu: elastic elasticSebenzisa: BroomFiber Length: 1100mmFineness: 0.20-1.80mmIndawo yemvelaphi: Jiangsu, China
Igama lebrand: XINJIA
Amandla okubonelela: 200000 Kilogram / Kilograms ngenyanga nganye
Iinkcukacha zokupakisha: I-PE tube, i-25kg kwibhokisi enye emdaka
Izibuko: iShanghai okanye iNanjing
Umbala Ngesicelo sabathengi
Indawo yokudlula Ujikeleze, unxantathu, usikrobana, njl
Ubude obusikiweyo 25mm ukuya 1220mm
Ububanzi beBundle 50mm okanye 80mm
Ukupakisha Iphepha le-PE
Ibhokisi 25kg okanye 30kg, ibhokisi brown
Ixesha lokukhokhela Iintsuku ezili-15 zomsebenzi
Intlawulo I-30% idiphozithi kunye nebhalansi ngokuchasene nekopi ye-B / L.
Ngenxa yokubuyiswa okuphezulu kwe-bend kunye nokusebenza kakuhle koomatshini, intambo ye-PET iyeyona ndawo ifanelekileyo yokuthambisa ibristle yendalo kunye nehashehair kwizicelo ezahlukeneyo ezisusela kwimitshayelo entle ukuya kwibrashi yepeyinti. Ngaphezu, intambo PET igcina intsebenzo yomzimba elungileyo kuluhlu lobushushu ngokubanzi.
Amava I-XINJIA isebenze kwifilamenti yentsimbi ngaphezulu kweminyaka elishumi, iyayiqonda indlela yokungena ngaphakathi kwiimfuno zokwenyani kunye nezona zixinzelelekileyo zabaxhasi, ukuhambisa izisombululo ezisebenzayo nezisebenzayo.
Ulwakhiwo kunye neFlexible MethodologyIndlela yethu eqinisekisiweyo isenza sikwazi ukuhlangabezana neemfuno zakho ngexesha kunye nexabiso ekujoliswe kulo. Siziqhelanisa neemfuno zakho kwaye sizibandakanya nangaliphi na ixesha kwishishini lebrashi.
Iqabane elithembekileyoSinceda abenzi bebrashi ngeenjongo zakho zeshishini ngokubonelela ngemicu emitsha ephuhlisiweyo. Njengomvelisi wobuchule beplastiki, sikholelwa ekubeni ekuphela kwendlela yokwenza umsebenzi wethu kukubonelela ngexabiso lokwenyani nelingqinisisekayo.
UyaphumelelaUninzi lweshishini lethu lithetha ngomlomo enkosi kubathengi bethu abaxabisekileyo. Sichaza ishishini eliyimpumelelo njengelinye esinokuthi sincede abathengi bomeleze ukhuphiswano kwiimveliso zabo. Ingxelo yethu yokuphumelela ibangelwa ziiodolo ezigqitywe kakuhle. Ifayibha nganye iveliswa phantsi kwabasebenzi abanamava kunye nolawulo olungqongqo lweQC.
Ingxelo ekhawulezileyo iya kungeniswa malunga nophando lwakho kwisithuba seeyure ezili-12, abasebenzi abaqeqeshwe kakuhle nabanamava bakulungele ukunikezela ngenkonzo.
Ixesha lokusebenza: 8:00 am - 5:00 pm, NgoMvulo ukuya ngoMgqibelo (UTC + 8).
Ubudlelwane bakho beshishini nathi buya kuba yimfihlo kuye nawuphi na umntu wesithathu.
Inkonzo elungileyo emva kokuthengisa.
Umenzi wobungcali Ukuba kwicandelo lemicu zeplastiki ngaphezu kweminyaka elishumi, kunye nemigca yemveliso eli-12 ukuqinisekisa ukuba unako ukuzalisekisa imfuneko abaxumi yeetoni ezingama-300 ngenyanga nganye.
Umgangatho onokuthenjwa Sibonelela ngemicu emininzi yabenzi bebrashi kunye nemitshayelo eyaziwayo ekhaya nakwamanye amazwe, ethi umgangatho uqinisekisiwe
Ixabiso lokukhuphisana Ukubaluleka kwethuce iyahambelana ngokusemgangathweni ophezulu, kwayeIxabiso elikhethekileyo linikezelwa xa likhulu.
Ukuhanjiswa kwangexesha Sizibeka ezicathulweni zabathengi kwaye sizibophelele ekunikezeleni ngonikezelo kwangexesha.
Zininzi iifemu onokukhetha kuzo. Kodwa ukuba ujonga intetho encinci kunye nenyathelo elininzi, uya kugqiba ngokukhawuleza ukuba sikhethwe nguwe.